Facebook နဲ့ Apple တို့ရဲ့တိုက်ပွဲက iOS user တွေကို ထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်လား? |
ဒီပြဿနာတွေရဲ့အစက iOS 14 ပဲဖြစ်ပါတယ် .. ပြဿနာအစအဆုံးနားလည်သွားအောင် အရင်ဆုံး Facebook ရဲ့လည်ပတ်ပုံကိုရှင်းပြမှဖြစ်ပါမယ်
Facebook ကိုကျွန်တော်တို့က အလကားသုံးလို့ရနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ (user) တွေဟာ Facebook ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်နေလို့ပါ .. Facebook ဟာ အသုံးပြုသူများတဲ့အတွက်ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ Facebook ကိုပိုက်ဆံပေးပြီး သူတို့ရဲ့ Product တွေကို ကျွန်တော်တို့ဆီရောက်အောင်ပြခိုင်းပါတယ်
ဒီတော့ ဘယ် user တွေက ဘယ်ထုတ်ကုန်တွေကိုကြိုက်တတ်လဲဆိုတာ Facebook ကလေ့လာပြီး အဆိုပါ user နဲ့သင့်တော်မယ့် product မျိုးကို သူ့ရဲ့ newsfeed မှာပြပေးပါတော့တယ်
ဒါပေမယ့် Facebook က user တယောက်ချင်းစီရဲ့အကြိုက်ကို ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်သလဲ?
ပထမတချက်အနေနဲ့ Facebook ကတီထွင်ထားတဲ့ Machine Learning Algorithm တွေနဲ့ ဒီ user ဟာ Facebook မှာ ဘာအကြောင်းတွေပြောနေလဲ, ဘာအကြောင်းတွေရှာနေလဲဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ပါတယ် .. အဲ့ထဲကမှ သင် Facebook မှာအသုံးအများဆုံးကိုစကားလုံးတွေကို Facebook ကရွေးထုတ်ပြီး အဲ့ Data တွေကိုမှတ်ထားပါတော့တယ်
နောက်တချက်က Cross-app Tracking ပါ .. Cross-app tracking ဆိုတာ Facebook ပေါ်မှာတင်မဟုတ်ပဲ တခြား App တွေမှာပါ သင်ဘာတွေသုံးနေလဲဆိုတာကို လိုက်ထောက်လှမ်းတာဖြစ်ပါတယ်
Facebook ပိုင်တဲ့ App တွေဖြစ်တဲ့ Messenger, Instagram, WhatsApp တို့ကသင်ပြောထားသမျှကိုထောက်လှမ်းတဲ့အပြင် သင့် Browser ကိုပါထောက်လှမ်းပါတယ် .. သင်နေ့စဥ်နဲ့အမျှ Browser ကနေ ရှာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Facebook ကသိရှိနေပြီး သင်ဟာဘယ်လို product တွေကိုကြိုက်တတ်လဲဆိုတာကို အသေးစိတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဟာ Facebook နောက်ကွယ်က လူတွေကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နေတာမဟုတ်ပဲ Facebook က လူတွေက Machine Learning Algorithm တွေကိုရေးထားပြီး သင့်ဆီကရရှိလာတဲ့ Data နဲ့ပြန် train ပေးထားတာဖြစ်လို့ ဒီလုပ်ငန်းစဥ်က user တိုင်းအတွက် အလိုအလျောက်လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်
ဥပမာဆိုပါစို့ … သင်ဟာ ရေမွှေးဝယ်ဖို့ Amazon, AliExpress တို့လို Online Shop App တွေကဖြစ်စေ, Safari, Chrome တို့လို Browser ကနေဖြစ်စေ ရေမွှေးအကြောင်းကိုရှာလိုက်မိတယ်ဆိုပါစို့ .. သင်ဟာဒီရေမွှေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့လူဖြစ်ကြောင်း Facebook က အလိုအလျောက်သိရှိပြီး သင့်ကိုရေမွှေးကြော်ငြာတွေပြနေတော့မှာပါ .. ဒါကို Personalized Ads လို့ခေါ်ပါတယ်
Apple နဲ့စပြီး ပြဿနာတက်တာ Cross-app tracking လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတက်တာပါ .. ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အရင်တုန်းက ကိုယ့်ကိုဘယ် App တွေကထောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုတာကို သိရှိပေမယ့် တားဆီးနိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူး
ဒါကို Apple က iOS 14 မှာ Privacy Feature အသစ်တခုထည့်သွင်းပြီးဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ် .. Apple ပြောပုံအရတော့ user တွေအနေနဲ့ ကိုယ့် data တွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် control လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသင့်ပါတယ်တဲ့
ဒီ Feature ဟာ App တခုခုကနေ နောက် App ထဲမှာဘာတွေသုံးနေလဲဆိုပြီးထောက်လှမ်းနေတာကို user ကိုအသိပေးမှာဖြစ်ပြီး user အနေနဲ့ထောက်လှမ်းခွင့် ပြုမပြုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသွားပါတယ်
Figure 1. iOS 14 Privacy Feature (Photo from: MacRumors)
ဆိုတော့ ခုနက Facebook လည်ပတ်ပုံနဲ့ပြန်ချိတ်ရရင် – Facebook က သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက် user data ကို ထောက်လှမ်းဖို့လိုပါတယ် .. အရင်ကထောက်လှမ်းခဲ့တာတွေကို user တွေအနေနဲ့ပိတ်ပိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူး .. အခု iOS 14 မှာ Apple က user တွေအနေနဲ့ ကိုယ့် data ကို ကိုယ်တိုင်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ cross-app tracking ကိုပိတ်ပင်လို့ရမယ့် feature ထည့်ပေးလို်က်ပါတယ်
အဲ့မှာ အကြီးအကျယ်ထပေါက်ကွဲတာက Facebook ပါပဲ .. Apple ရဲ့ဒီ privacy feature အသစ်ကို Facebook ကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပါတယ် .. Facebook က Small Business လေးတွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ Apple ကိုဒီ feature ဖြုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပေမယ့် ဒါဟာသူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တောင်းဆိုတာပါပဲ
ဒီကိစ္စမှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ Apple ရဲ့ “User တွေဟာ ကိုယ့် data ကို ကိုယ်တိုင်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ခွင့်ရှိရမယ်” ဆိုတဲ့ အဆိုကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ် .. Facebook အနေနဲ့လဲ သူ့ကို tracking လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပေးတဲ့လူတွေဆီကနေ ဆက်လက်ထောက်လှမ်းလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီအခြေအနေမှာ Apple က သူ့ရဲ့စည်းကမ်းကိုအတိအကျမလိုက်နာရင် Facebook ကို AppStore ပေါ်ကနေဖြုတ်ချဖို့ဝန်လေးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး .. ဒါကိုလဲလူတော်တော်များများကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်
ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့မဖြုတ်ချနိုင်လောက်ပါဘူး .. Apple ဖက်ကကြည့်ရင် Facebook က user များလွန်းတာကြောင့် iPhone တွေပေါ်မှာ Facebook App မရှိတော့ရင် Android ဖက်ပြောင်းမယ့်လူတွေအများကြီးပါပဲ .. ဒါဟာ Apple ရဲ့ market share တွေလျော့နည်းသွားနိုင်ပြီး Apple ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်
Facebook ဖက်ကိုကြည့်ရင်လဲ Facebook အသုံးပြုသူတွေထဲမှာ iOS platform ပေါ်ကနေသုံးနေတဲ့လူတွေအများအပြားရှိနေပါတယ် .. တကယ်လို့ Facebook App သာ AppStore ပေါ်ကဖြုတ်ချခံရရင်ဒါဟာသူ့ရဲ့ ဝင်ငွေထိခိုက်တော့မှာပါ
ဒီတော့ Facebook App ကို AppStore ပေါ်ကဖြုတ်ချခြင်းဟာ ၂ ဖက်လုံးအတွက်နစ်နာစရာတွေချည်းပါပဲ .. ပြီးတော့ ဒီဖက်ခေတ် Business သမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့အမြတ်ပမာဏကိုတိုးချဲ့ဖို့ပဲလုပ်ဆောင်နေကြတာပါ .. ဘယ်သူမှ ယုတ်လျော့သွားမှာကိုမလိုလားပါဘူး
ဒီကိစ္စမှာထပ်ပြီးနစ်နာမှာက Page တွေပါပဲ .. သူတို့ရဲ့ပို့စ်တွေကို ဘယ်သူတွေကကြိုက်တတ်လဲဆိုတာ tracking လုပ်မရရင် Page တွေအနေနဲ့ Engagement နည်းသွားနိုင်ပါတယ် .. ဒါကိုလဲ Facebook ကကြိုသတိပေးထားပါတယ် .. အမှန်တော့ဒီလိုကြိုသတိပေးတယ်ဆိုတာ သတိပေးသလိုလိုနဲ့ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတဖက်လှည့်နဲ့ ယူဖို့ကြိုးစားတယ်လို့မြင်မိပါတယ် .. ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် Page engagement ကျသွားမှာကိုမလိုလားကြဘူးမဟုတ်လား?
ဒီတော့ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် Facebook App ဟာ AppStore ပေါ်ကဖြုတ်ချခံရနိုင်ချေမရှိပဲ တရားရုံးမှာတင် ပြေလည်သွားမယ့်ကိစ္စလို့မြင်မိပါတယ် .. Electronic Frontier Foundation (EFF) ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ Facebook အပေါ်အကြီးအကျယ်ရှုံ့ချထားပါတယ်